ဘက်စုံသုံး 5-ဓါးဟင်းသီးဟင်းရွက်လိမ် slicer ဟင်းသီးဟင်းရွက်လိမ်
5-ဓါးဟင်းသီးဟင်းရွက်ခရု Slicer လိမ်: အကောင်းဆုံးဟင်းသီးဟင်းရွက် Slicer လိမ် သုပ်, ဟင်းသီးဟင်းရွက်ခေါက်ဆွဲနှင့်5Blade ပြီးတော့သိုလှောင် Box ကိုအတူဟင်းသီးဟင်းရွက်ခေါက်ဆွဲအီတလီခေါက်ဆွဲဥရောပနိုင်ငံ, Make ရန်။
သင်တစ်ဦးကျန်းမာသောအစားအစာအလေ့အထချင်ပါသလား လာ. ဝယ်ဖို့ 5-ဓါးဟင်းသီးဟင်းရွက်ခရု Slicer နှင့်သင့်မုန့်ညက်ပျော်မွေ့! ငါးကွဲပြားခြားနားသောဓါးသွား useful.You သငျသညျတိုင်းဖြတ်စတိုင်အဘို့လိုအပ်သင့်လျော်သောဓါးကိုသုံးနိုင်သည်ဖြစ်ကြသည်။ A ကောင်းဆုံးဟင်းသီးဟင်းရွက်ခေါက်ဆွဲဟင်းသီးဟင်းရွက်လိမ်ရှုး, သုပ်ထုတ်လုပ်သူဟင်းသီးဟင်းရွက်လိမ်။
သင်တိုင်းဖြတ်စတိုင်အဘို့လိုအပ်သင့်လျော်သောဓါးသုံးစွဲဖို့ခွင့်ပြုထားတဲ့ဓါးသွားဖြတ်တောက်၏5စတိုင်များနှင့်အတူဟင်းသီးဟင်းရွက် Sprializer ။ကြက်သွန်နီ, မုန်လာဥနီ, zucchinis, သခွားသီး, အာလူး, ချိုမြိန်အာလူးနှင့်တူဟင်းသီးဟင်းရွက်နှင့်ပိုပြီးအဘို့အပြီးပြည့်စုံသော။
5-ဓါးဟင်းသီးဟင်းရွက်ခရု Slicer, ဟင်းသီးဟင်းရွက်လိမ်
တစ်ကုန်ကြမ်းအစားအစာနှင့်အနိမ့် carb အစားအစာအပေါ်မည်သူမဆိုများအတွက်အကောင်းဆုံးလိမ် slicer! အဆိုပါဟင်းသီးဟင်းရွက်လိမ် စူပါသုပ်အတွက် moms, ချက်ပြုတ်, ကျန်းမာ-သတိ friends.Perfect တစ်စုံလင်သောဆုကျေးဇူးခေါက်ဆွဲတစ်ခုကျန်းမာ, အမြန်-ထမင်းချက်အခြားရွေးချယ်စရာဒါမှမဟုတ်အရည်အသွေးမြင့်ဟင်းသီးဟင်းရွက်ရတဲ့အခါ, အခြားအ dishes.This တစ်အိမ်ရှင်သင်တို့အဘို့တစ်အံ့သြစရာလက်ဆောင်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ် အကောင်းဆုံးကို price.Also များအတွက် slicer လိမ်ကလေးများဟင်းသီးဟင်းရွက်များပိုပြီးဆွဲဆောင်မှုအောင်နေဖြင့်မိဘများကူညီပေးသည်။ လွယ်ကူသော, အသက်ရှင်ခြင်းကိုပျော်စရာသိမ်းဆည်းထားပါနှင့်ကျန်းမာ။
အဖြူ + အစိမ်းရောင်
ကို ABS + PS + S ကို / S ကို 420J2 + S ကို / S ကို 301
polybag / colorbox နှုန်း 1 PCs, စက္ဏူထူနှုန်း 12 PCs, 58.5x27.5x63cm
on / off စုတ်ယူခြင်းများအတွက်အကူးအပြောင်း 2.back
4.five ဓါးသွား (2mm, 3mm, 5mm, 5.5mm နှင့် Flat ဓါး)
5.suction pad ပါ
သင့်ရဲ့အာကာသကယ်တင်နဲ့အလွယ်တကူသင်နှင့်အတူခရီးသွားဘို့ထဲကယူနိုင်ရန် slicer ခန္ဓာကိုယ်ပိတ်ဓါးမျှော်စင်ရရန်ရှေ့ဆက်ထုတ်ပြန်ရန် button ကိုနှိပ်ပါ။
တစ်ချိန်ကသော့ခတ်, စစ်ဆင်ရေးကာလအတွင်းတည်ကြည်ဟင်းသီးဟင်းရွက်လိမ်ထားရန် ON / OFF လွယ်ကူသောလီဗာနှင့်အတူစုတ်ယူခြင်း pad ပါခိုင်မြဲစွာနာရီများအတွက်ကောင်တာမှလုံခြုံနေဖို့ပါလိမ့်မယ်။
သော့ခတ် levered ကြီးမားသောစုတ်ယူခြင်းခွက်ကိုအလွန်ကောင်းစွာရရှိထားသူများနှင့်လွှတ်ပေး။
အဆိုပါ5ဓါးသွားသူတို့အစွန်းရောက်ချွန်ထက်နေမည်ကိုသေချာစေရန်ဂျပန် 420-grade ကိုခိုင်မာစေသံမဏိနဲ့လုပ်ထားတဲ့နေကြသည်။
အဆိုပါ5ဓါးသွားဖြတ်တောက်မှု၏ကျယ်ပြန့်မျိုးစုံလုပ်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲထားပါသည်။ (Flat ဓါး, 2MM ဓါး, 3MM ဓါး, 5MM ဓါး, 5.5MMblade)
အဆိုပါဓါးသွား၏3ပစ္စည်းအပေါ်ပူးတွဲပါလိမ့်မည်နှင့်အခြားနှစ်ဦးကိုတစ်ဦးပွင့်လင်းပလပ်စတစ်သိုလှောင်မှု box ထဲမှာကောင်းမွန်စွာနေထိုင်။
ဓါးသွား၏ဘေးကင်းလုံခြုံသိုလှောင်မှုအတွက်အပိုဓါး caddy - ပျောက်ဆုံးသွားပါသို့မဟုတ်မတော်တဆထိခိုက်ဒဏ်ရာရစေနိုငျသောအဘယ်သူမျှမကပိုချောင်ဓါးသွား။
အသုံးပြုရလွယ်ကူစေခြင်းငှါဒီဇိုင်း, သိုလှောင်, စင်ကြယ်။
ကျန်းမာ together.Come စောင့်ရှောက်ခြင်းနှင့်ညာဘက်ယခုအခါဟင်းသီးဟင်းရွက်လိမ် slicer မဝယ်ရအောင်။
ဟင်းသီးဟင်းရွက်လိမ် slicer များ၏လုံခြုံရေးနှင့်တည်ငြိမ်အေးချမ်းရေးနှင့်ပတ်သက်ပြီး 1.What?
အဆိုပါဓါးသွားမလုံခြုံဓါးသွားထုတ် pop နှင့်ဒဏ်ရာပြုပါရှိခြင်းကနေအသုံးပြုသူများနှင့်အနီးအနားရှိနေသောပတ်ဝန်းကျင်ကလူကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်စေခြင်းငှါ, ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်တွင် Blade ကိုသိုလှောင်ဆင်အခြေစိုက်စခန်းသို့လုံခြုံစွာသော့ခတ်။
ဒါကပရီမီယံဟင်းသီးဟင်းရွက်လိမ်အစွမ်းထက့်ရှိပါတယ်သုံးစွဲဖို့ကအလွန်လွယ်ကူပြီးလုံခြုံစိတ်ချရသောအောင်သင့်ရဲ့ကောင်တာသို့မဟုတ်စားပွဲပေါ်တွင်တည်ငြိမ်ရေးတို့အတွက် uction ခွကေို,! ရုံပြားချပ်ချပ်မျက်နှာပြင်ပေါ်မှာနေရာနှင့်သင်လှီးဖို့အဆင်သင့်ပါပဲ။
အဆိုပါဟင်းသီးဟင်းရွက်လိမ်ခိုင်မာတဲ့နှင့်ထိုကဲ့သို့သောအာလူးနဲ့ zucchini, squash, မုန်လာဥနီ, သခွားသီးနှင့်ပိုပြီးလည်းကြီးမြတ်ချိုမြိန် potatoes.It အဖြစ်ခက်ခဲတဲ့ဟင်းသီးဟင်းရွက်နှင့်အသီးအပွများအတွက်ကောင်းစွာအလုပ်မလုပ်ဖို့လုံလောက်တဲ့အစွမ်းထက်သည်။
ပတ်ရစ်တတ်သော သင်တိုင်းဖြတ်စတိုင်အဘို့လိုအပ်သင့်လျော်သောဓါးသုံးစွဲဖို့ခွင့်ပြုထားတဲ့ (Flat ဓါး, 5MM ဓါး, 2MM ဓါး, 3MM ဓါး, 5MMblade) ဓါးသွားဖြတ်တောက်၏ 5.5 စတိုင်များနှင့်အတူ။
သင့်ရဲ့ဗီတာမင်စားသုံးမှုတိုးမြှင့်ဖို့ 4.Helpful လမ်း
အဆိုပါဟင်းသီးဟင်းရွက် ပတ်ရစ်တတ်သော အရသာကျန်းမာ spaghetti သို့ဟင်းသီးဟင်းရွက်ကိုဖွင့်, သင်ဗီတာမင်စားသုံးမှုတိုးမြှင့်ဖို့ကူညီပေးမည့်အစာရှောင်ခြင်း, လွယ်ကူသောနည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်။
5.Enjoy သင့်ရဲ့မုန့်ညက် & တိုးတက်ကောင်းမွန်သင့်ကျန်းမာရေး
ဤသူသည်ငါဒီကြောင်လိမ်လိမ်နိုင်အောင်အံ့သြကြောင်းအံ့သြသွားတယ်, ငါ၏ဒုတိယလိမ်ပါ! ငါတကယ် this.This နဲ့တူအာလူး, zucchini နှင့်အခြားဟင်းသီးဟင်းရွက်များအပေါ်အစာရှောင်ခြင်းနှင့်လွယ်ကူသောအလုပ် လုပ်. kitchen.This အတွက်ငါ့အဘို့ကောင်းသော slicer ဖြစ်ပါတယ်။ ငါသည်အမြင့်မားကအကြံပြု!
ဝိုး!! ဒီအစဉ်အမြဲငါကိုအသုံးပြုပါတယ်အရှိဆုံးအံ့သြဖွယ်လိမ်ဖြစ်ပါတယ် !! ရှေးဦးစွာငါနောက်ကျောအပေါ်တစ်ဦး switch ရဲ့တစ်ခေါက်နှင့်အတူကကောင်တာမှဿုံကပ်လျက်ဘယ်လောက်ချစ်ကြတယ်။ ဘက်ခြမ်းမှာအစိမ်းရောင်လက်ကိုင်ဘုလမ်းညွှန်အလွန်ကြံ့ခိုင်သည်နှင့်လည်းလွယ်ကူပါတယ်သိုလှောင်မှုတက်သည်လှန်ပေးသည်။ အဆိုပါဓါးသွားများအတွက်ဖြန့်ချိ button ကိုဘေးကင်းလုံခြုံလွယ်ကူဓါးများအတွက် switching.I'm ချိုမြိန်အာလူးအဖြစ်ကောင်းစွာ spiralize ဖြစ်ကြောင်းဘယ်လိုလွယ်ကူသောအံ့သြစေသည်။ ဤသည်ကိုအများဆုံး, အကြမ်းခံသုံးစွဲဖို့လွယ်ကူပြီးကျစ်လစ်သိပ်သည်းလိမ်ပါ!
အောက်ခြေအပေါ်ကြီးမားစုတ်ယူခြင်းခွက်ကိုတစ်ဦးချောမွေ့ကောင်တာပေါ်တွင်အံ့သြလောက်အောင်ကိုကောင်းစွာရရှိထားသူ! အသစ်စုတ်ယူခြင်းလက်မောင်းကောင်တာထိပ်, လွယ်ကူသောလွှတ်ပေးရန်မှလုံခြုံရန်ဒါရိုးရှင်းသောစေသည်။ ဒါ့အပြင်အသစ်ကဓါးလွှတ်ပေးရန် button ကိုအလွန်ကောင်းတဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ အကြှနျုပျ၏အကွိုကျဆုံးတိုးတက်မှုအပိုဓါးသိုလှောင်မှုဖြစ်ပါတယ်။ အဘယ်သူမျှမဓါးသွားသည့်ဗီရိုထဲမှာတင်သော! အနည်းငယ်သေးငယ်အရွယ်အစားလည်းစတိုးဆိုင်ကပိုမိုလွယ်ကူစေတော်မူ၏။ gluten အခမဲ့ခေါက်ဆွဲ, သူတို့ကိုမချစ်! အဆိုပါဓါးသွားပေါ်အပြုသဘောဆောင်သောတံခါးကျင်စနစ်ဟောင်းကိုလမ်းထက်အများကြီးပိုလုံခြုံခံစားရတယ်။ အဆိုပါဓါးကျင်းပနိုင်ရန်ခွက်ကိုပဲအခြားဆုကြေးငွေပါ!
ကျွန်မအလွန်အမင်းဒီလိမ်အကြံပြုပါသည်။ ငါကအနည်းဆုံးနှစ်ခုအဆတစ်ပါတ်ကိုသုံးပါ။ သုံးစွဲဖို့အလွန်လွယ်ကူပါတယ်။ ကို clean up တစ်ဦးလေပြေဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာအစ do.Nice မှဟင်းသီးဟင်းရွက်အနည်းငယ်ပိုစိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်စေသည်!
ငါသည်ဤလိမ်နှင့်အတူအလွန်ကျေနပ်မိပါတယ်။ ဒါဟာကောင်းစွာလုပ်များနှင့်အသုံးပြုရလွယ်ကူအလွန်ကြံ့ခိုင်ဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ဦးသက်သတ်လွတ်ငါ၏အအစားအသောက်များတွင်အဓိကအားသစ်သီးများနှင့်ဟင်းသီးဟင်းရွက်များပါဝင်ပါသည်အဖြစ်။ ဤသည်ကိုအလွန် prep အချိန်ပေါ်ကဆင်းလျှော့ချခြင်းနှင့်ငါဓားသို့မဟုတ်တစ် mandoline ကိုပြုသဖြင့်ဘယ်တော့မှနိုင်ကြောင်းမူကွဲနှင့်ဖြတ်တောက်မှုကိုမှန်ကန်စေသည်။ ဒါဟာငါ့အစာစားပြီးစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းပြီးလှပနှစ်ဦးစလုံးကို!
ဒီထုတ်ကုန်အလုပ်လုပ်တယ်ကြောင့်ကောင်းစွာအလုပ်လုပ်တယ်။ ငါထိုကဲ့သို့သောယူနစ်နှင့်သင် spiralize အဖြစ်ရှေ့ဆက်လိမ်ရွေ့လျားအတူကူညီပေးဖို့ချခေါက်လက်ကိုင်၏အခြေစိုက်စခန်းအပေါ်ဓါးသိုလှောင်မှု bays အဖြစ်အသေးစိတ်ဖို့အာရုံကိုချစ်ကြတယ်။ ငါသုပ် prep သို့မဟုတ်အိုးကင်သို့မဟုတ်နံနက်စာနဲ့တူဟင်းလျာများအတွက်ဟင်းသီးဟင်းရွက်များထည့်သွင်းရန်မလိုအပ်သည့်အခါတိုင်းငါ့သွားလာရင်းအတိုင်းဤအသုံးပြုတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ ငါကွဲပြားခြားနားသောဓါးသွားကိုချစ်နှင့်သုံးစွဲဖို့ကဒါလွယ်ကူပါတယ်။